ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော Cyclone Mahasen သတင်း... ( မေလ ၁၁ ရက် နေ့) ~ MSU Portal
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော Cyclone Mahasen သတင်း... ( မေလ ၁၁ ရက် နေ့)
5/11/2013 10:30:00 PM Navi Kyaw No comments
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မုန်တိုင်းငယ် 01B13 ဟာ ဒီကနေ့ မေလ ၁၁ ရက်နေ့ အစောပိုင်းမှာ
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မဟာစင် (Mahasen) အဖြစ်သို့ 
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မဟာစင် ဟာ မေလ ၁၂ ရက်နေ့ အထိ အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့ လျားနိုင်ပြီး...
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့ လျားပြီး မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်ကနေ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ ခန့် မှန်းထားကြပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မဟာစင် မှတ်တမ်း
မေ ၄ - အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ အီကွေတာမြောက်ဘက်ခြမ်း၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ဘက် တွင် လေစီးကြောင်းဧရိယာ ( Area of Convection ) တစ်ခုကို စတင်တွေ့ ရှိ...
မေ ၈ - လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (Low Pressure Area) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ...
မေ ၁၀ - အမေရိကန်နိုင်ငံ Joint Typhoon Warning Center (JTWC) မှ Tropical Cyclone Formation Alert (TCFA) အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်...
မေ ၁၀ - JTWC မှ Storm Warning (မုန်တိုင်းသတိပေးချက်) ထုတ်ပြန်... 01B ဟု သတ်မှတ်...
မေ ၁၁ - အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ် 01B13 မှ အားကောင်းလာပြီး ဆိုင်ကလုန်း Mahasen အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့...
မေ ၁၁ - တိုင်းတာချက်များ အရ Cyclone Mahasen ရဲ့ အချက်အလက် အချို့ ...
Minimum Central Pressure : 989 hPa.
Estimated Maximum Surface Wind Speed : 50 Knots( 92 km/hr.) / Gusting up to 65 Knots ( 120 km/hr.)
Present Position : 8.8N 88.8E
MOVEMENT PAST SIX HOURS : 305 DEGREES AT 15 KTS.
Updated @ 111200Z. ( မေ ၁၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃၀ နာရီ )
အချက်အလက်များ ကို SkyNet Up To Date Channel, Wikipedia, JTWC နဲ့NOAA website များမှ ရယူပါသည်။
Posted in: knowledge,news